Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguLouize
Molo, iRamsdale Lodge Annex yindlu yestudio ephangaleleyo edityaniswe nendlu enkulu enomnyango wayo wabucala. Sibekwe kwindawo elula ukuhamba nje ngemizuzu eli-10 ukuya kulwandle lwaseSouth Bay, kunye nokuhamba imizuzu eli-10 ukuya edolophini. Sineendawo zokupaka ezitratweni ezifumanekayo ngaphandle kwepropathi. Ukubonisa nje kukho izinyuko ezithe kratya phambi kwendlu.
Eli gumbi le studio libanzi kwaye likhululekile. Sine 2 iibhedi link zip leyo ingagcinwa njengoko 2 singles okanye kudityaniswe kunye ukwenza ibhedi Superking. Kukwakho nebhedi yeendwendwe enokuthi isetyenziswe mhlawumbi kumntu oselula. Kukho indawo yekhitshi exhobe ngokupheleleyo enezixhobo ezininzi ukuba unqwenela ukuhlala kwaye upheke. Igumbi lokuhlambela eliphangaleleyo, elineetawuli.
Idolophu ethandekayo yolwandle yaseScarborough inamakhubalo amaninzi alungele yonke iminyaka. Indawo yethu ikumgama nje wemizuzu eli-10 ukuya elunxwemeni loMzantsi Bay, iikhefi, iivenkile zekofu kunye neentlanzi kunye neetships! Ithiyetha ye-Spa apho kukho iikonsathi kunye nemiboniso unyaka wonke, kwaye ukuba uyonwabela iholo yeqonga, uStephen Joseph Theatre ubamba imidlalo kwaye abonise iifilimu. Ukuzulazula edolophini ungajonga ezivenkileni, kwaye ukuba uyathanda ukutya eScarborough ineendawo zokutyela ezibalaseleyo. Ngaphesheya kwendlela ukusuka kuthi i-Cellars Bar yindawo yokushicilela enobuhlobo ebonelela ngokutya okuthandekayo kunye nee-ales zokwenyani. INorth Bay yeScarborough ikwanezinto ezininzi ezinokubonwa, iPeasholm Park enechibi layo lokuhamba ngesikhephe, iSealife Centre kunye neOpen Air Theatre ebambe iinkwenkwezi ezininzi ukusuka kuTom Jones noElton John ukuya eBritney Spears kunye noKylie Minogue. Okokugqibela kodwa kungancinci iNqaba yaseScarborough ikufanele ukutyelelwa!
Umbuki zindwendwe ngu- Louize
Indlu idityaniswe nendlu enkulu esihlala kuyo. Ukuqonda imfihlo yeendwendwe zethu sikushiya ukonwabele ukuhlala kwakho, nangona kunjalo ukuba unayo nayiphi na imibuzo sihlala sivuya ngakumbi ukukunceda.